Dibad-baxyo la filayo in ay ka billowdaan Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dibad-baxyo la filayo in ay ka billowdaan Muqdisho
Tan iyo markii uu dhamaaday waqtigiii sharciga ahaa ee xil-heynta Madaxwenaha, waxaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa xaalado siyaasadeed oo is diidan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Siyaasiyiinta Mucaaradka ah ayaa magaalada ka wada ololihii ugu xooganaa oo lagu qabanayo bannaabaxyo waaweyn oo looga soo hor jeedo sababtii uu Farmaajo ugu fashilmay qabashada doorasho xilligeedi ku dhacda.
Isku soo baxyadaan waxaa taageeraya oo dhankooda ka abaabulaya qaybaha kala duwan ee Bulshada Muqdisho, oo ay ugu horreeyaan Odoyaasha dhaqanka iyo Siyaasiyiin la magac baxay Golaha Badbaadinta Qaranka.
Sida la qorsheeyay dibad-baxyadaan ayaa bilaabanaya maanta oo Talaado ah, lamana oga in ay ka qeyb qaadan doonaan oo ay fagaarayaasha soo istaagi doonaan madaxda Midowga Musharixiinta Soomaaliya oo hore u ballan qaaday in ay dadka hor kici doonaan.
War kasoo baxay Golaha la magac baxay badbaadinta Qaranka ayaa lagu yiri “Dibadbaxyada dhacaya waxa uu Shacabka kusoo bandhigayaa xuquuqda Dastuuri, maadaama aysan muuqan qabsoomidda Doorashooyinka lagu heshiiyay, sidaas awgeed laga bilaabo 9-ka Federaayo 2021 waxaa dhacaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu muujinayo in loo baahan yahay qabashada Doorashada oo 4-tii sano mar la qabto”.
Lama oga sida ay bannan-baxadan oga jawaaabi doonto Dowladda waqtigeedu dhamaaday maadaama Wasaaradda Amnigu ay dhawaan shaacisay in aan Muqdisho lagu qaban karin dibad-bax aysan ka warqabin.
Farmaajo oo aan hadda sifo sharci ah kula fadhin kursiga Madaxweynaha aya ku fashilmay inuu dalka ka qabto doorasho la isla ogol yahay, waxuuna Afartiisi sano dhameysatay isaga oo aan cidna heshiis la ahayn.